Yaa Kiiniya kula taliyay inay markale ka cararto fagaaraha dooda badeena iyo maxayse sugeysaa - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Yaa Kiiniya kula taliyay inay markale ka cararto fagaaraha dooda badeena iyo maxayse sugeysaa
Waxa xalay warar aan la xaqiijin sheegayeen in Kiiniya si rasmi ah markale uga carartey goobta fagaaraha ee maxkamada caalamiga ee ay taalay badda ay nagu haysato. Waxaadse is weydiin kartaa yaa kula taliyay inay halkaas wax dooda ka gaysan.
”Waa la ogaa horena waa loo ogaa inayna Kiiniya haba yaraatee haysan wax dooda oo ku saabsan baddeena ay rabtey inay si sahala ku qaadato ayuu yiri Xuseen Warsame
Waxase dooda weyn ka dhex taala yaa kula taliyay inay goobta ka cararto isla markii dacwadan bilaabanteyda ileyn qof wax xaqiiqa wataa ma cararo.
”Taageereyaasha ugu weyn ee Kiiniya sida Maraykanka iyo Ingiriiska waxay kula taliyeen inayna aadin maxkamada markii ay fiiriyeen sida loogu garaacayo goobtaas waayo khuburada qaar ee Somaliya u doodaya oo ka soo jeeda wadamadaas ayaa og inayna arin meesha ku hayn ayuu yiri Xuseen Warsame
Maraykanku ma rabo in arinta badda ku dhamaado maxkamada caalamiga wuxuuna kula taliyay Kiiniya inay dacwadeeda soo ceshato. ”Somaliya awood maleh ay ku haysato baddaas waayo ciidanka Kiinikya ayaa jooga Somaliya ayuu yiri taageere ka tirsanaa xisbigii xagjir Taram marka Kiiniya yayna tagin.
”Waa muhiim in Somali ahan aan fahano cida aan la macaamileyno waayo Kiiniya waa dal aan waxba ina dhaamin inkastoo inagu 30 aan burbursanayn isagu 30-kaa sano wuxuu ka shaqaynaayay inuu ina kala sii fogeeyo.
Aakhirkiina waxaa loo sheegay si aad badda u ilaashato waa inaad gashaa gudaha dalka xad beeneedkana aad u kordhisataa adoo silig ku xiraya.
Kiiniya waxaa lagu yiri dagaal mooyee si kale oo aad ku xaqiijin karo muranka aad wado ma jiro waana go’aanka ay uga carartey maxkamada, waxana lagu yiri yayna la soo bixin kheyraadkaas.